Deg deg :Ethiopia Xiisad dagaal oo ka dhex aloosan Tigreyga iyo Axmaarada. - Ogaden24 | Ogaden24
Deg deg :Ethiopia Xiisad dagaal oo ka dhex aloosan Tigreyga iyo Axmaarada.
Xiisada u dhaxaysa maamulka Deeganka Axmarada iyo kuwa ku meel gaadhka ah ee Tigreega ayaa maalmahan cirka isku shareertay.
Waxaad lasocoteen in dhulka Wolkeyt, Raya iyo Takade ay gacanta ku dhigeen ciiddamada Axmaradu kaddib dagaalkii waqooyi.
Daddaal baddan oo ay Dawladda dhexe samaysay si ay ug fur’furto dhulkaas ayaan noqonin mid midha dhala, waxaana ugu dambeeyay wafdigii ay hoggaaminayeen Mustafe Omer iyo Shimales Abdisa oo Bahirdar gaadhay, si maamulka Axmaarada usoo lux luxaan.
Toddobaado kahor maamulka ku meelgadhka ah ee Tigreega oo uu hoggaaminayo madaxa xafiiska arrimaha bulshada,Abraha Desta ayaa Addiss-Ababa kula kulmay Abiye Ahmed, si ay ugu gudbiyaan cabasho dhulkan la xidhiidha.
Xiisadan waxaa cirka kusii shareeray kaddib markii maamulka Axmaaradu bilaabay innay qaab-dhismeedkooda ku dhaadhicayaan Degmoyinka lagu muransan yahay.
Waxayna xaruumaha Dawladda geeyeen shaqale deeganka Axmarada ka socda, waxayna bilaabeen in luuqada Axmaariga dib uga bilaaban goobahan oo ay luuqadooda shaqo Tigree ahayd.
Intaas wixii ka dambeeyay Abraha Desta ayaa afka furtay, wuxuuna maalmo kahor sheegay innaysan taako dhul ah ka tanaasuli doonin, ‘haddii dhul Tigreega kamida la qaato, xilkayga intaan iska casilo ayaan toos uga hor iman doonaa xukuumada Abiye Ahmed” ayuu qoraal ku yidhi Abreha Desta oo kamida maamulka ku meelgadhka ee Tigreega.
Kulan Mekelle ka qabsoomay ayuu Abraha si kulul uga hadlay, waxaana bannanka la keenay cod lagu duubay oo uu Dawladda dhexe ku dhaliilayo innay been ka faafiyaan shacabka Tigreega.
Sigaara wuxuu ka biyo diiday in la qariyo ciddamada Eritrea oo uu sheegay innay boob waddaan, wuxuu kaloo warbaahinta Dawladda ku eedayay innay faafiyaan nacayb Tigreega ku wajahan iyo waliba xogo been ah oo aan bulshada loo qabbanin.
Madaxwaynaha Axmaarada oo maalin kahor warbaahinta la hadlay ayaa sheegay innaan hadda kaddib loo dul qaadin doonin arrimaha qaarkood, wuxuuna carabka ku adkeeyay innay mudnaanta siin doonaan arrimaha masiiriga ee Axmaarada.
Qaar kamida hoggaaminta xisbiyada Axmarada ee mucaaradka oo haddalkii Abraha Desta ka jawabayay ayaa sheegay innaysan taako dhula dib u bixin doonin, waxayna carabka ku adkeeyeen in dhulkii xoogaga laggaga qaatay ay soo ceshadeen.
Shacabka Tigreega ayaa maamulka ku meelgadhka ah ku caddaadinaya innay dhulka soo celiyaan, si ay quluubtooda u degaan. Halka bulshada Axmarada iyo maamulkoodu u arkaan innay heleen fursad ay mudda baddan naawilayeen, islamarkaana lagu fara adaygo dhulka ay haystaan, si ay codka shacabkooda ugu helaan doorashada.
Xukuumada Abiye Ahmed ayaa wajahaysa xaalad addag, xili doorasho dalku u dareerayo.